आफैँलाई माया गरेर मनाऔँ ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’::Nepali News Portal from Nepal
आफैँलाई माया गरेर मनाऔँ ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’
काठमाडौँ,२ फागुन -आफैँलाई माया गर्नु जीवनका लागि सञ्जीवनी हो । त्यसपछि मात्र हामी अरुलाई खुलेर माया गर्न सक्छौँ । यो ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’मा थाहा पाऔैँ, कसरी आफैँलाई माया गर्ने भनेर ।२४ घण्टामा हाम्रो दिनको पूरा समय घर र अफिसको काम गर्दैमा बित्छ । राति सुत्ने समयमा पनि ‘भोलि के–के गर्नु छ’ भन्ने कामको हिसाबकिताब गर्दैमा बित्छ ।तर, मुख्य प्रश्न यहाँनेर उब्जन्छ, दिनरात नभनी काम गर्दा पनि किन हामी खुसी हुन सक्दैनौँ ? तपाईं किन खुसी हुनुहुन्न ? यसकारण कि, तपाईंको हेरचाह कसैले गर्दैन, वा कसैले तपाईंलाई समय दिँदैन ?
रानीपानीबासीले खानेपानी खोज्न डोकोमा गाग्री बोक्न नपर्ने
बिद्यालयस्तरीय भलिबल युएस एकेडेमीलाई
ग्रामीण पर्यटनको बिकास, प्रदेश समृद्धिको आधार : मुख्यमन्त्री